တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အား နီပေါတပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် Gen. Ranjendra Chhetri က ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့် ကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဒီဇင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၈
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ – ၁၀
နီပေါဖက်ဒရေးရှင်းသမ္မတနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသည့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အား နီပေါတပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် Gen. Ranjendra Chhetri က ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ခတ္တမန္ဒူမြို့ရှိ၊ နီပေါတပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်ရုံးရှေ့ မြက်ခင်းပြင်၌ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့်ကြိုဆိုသည်။
အဆိုပါဂုဏ်ပြုကြိဆိုပွဲအခမ်းအနားသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှတပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ နီပေါဖက်ဒရေးရှင်းသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးထွန်းနေလင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာစစ်သံ (ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ် သိန်းဇော်တို့တက်ရောက်ကြပြီး နီပေါတပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ နီပေါတပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြသည်။
ဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့်ကြိုဆိုမည့်နေရာသို့ရောက်ရှိရာ နီပေါတပ်မတော်မှ Chief of General Staff ဖြစ်သူ Lt. Gen. Purna C Thapa က ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သည်။ ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့၏ အလေးပြုခြင်းကိုခံယူပြီး ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့အား စစ်ဆေးသည်။
၎င်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် နီပေါတပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်တို့သည် အစည်းအဝေးခန်းမတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြသည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် နီပေါတပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်က ယခုကဲ့သို့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံမှနီပေါနိုင်ငံသို့ ပထဦးဆုံးလာရောက်သည့်မြန်မာ့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တစ်ဦးအနေဖြင့် သမိုင်းဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပြီး နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်ကြား ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန်လည်ပတ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ သင်တန်းသားများအပြန်အလှန် စေလွှတ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလမှစ၍ ယခုအချိန်အထိ နီပေါလူမျိုး ဂေါ်ရခါးအရာရှိ၊ စစ်သည်များ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုနှင့် စွမ်းရည်သတ္တိ၊ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူများရရှိခဲ့သည့်အခြေအနေအား အပြန်အလှန်ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် နီပေါတပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်တို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ကြသည်။
ထို့နောက် အစည်းအဝေးခန်းမတွင် နီပေါတပ်မတော်စစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူး Bri. Gen. Kaji Bahadur Khatri က နီပေါတပ်မတော်ပေါ်ပေါက်လာမှုသမိုင်းကြောင်း၊ နီပေါတပ်မတော်မှနိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေမှု အခြေအနေများ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အခြေအနေများနှင့် နီပေါနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အခြေအနေများအား Power Point ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြရာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က သိရှိလိုသည်များအား မေးမြန်းဆွေးနွေးသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က နီပေါတပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်ရုံးရှိဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။ ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် နီပေါတပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်တို့သည် တက်ရောက်လာကြသည့်နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများနှင်အတူ အမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။
ထို့အတူ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် မွန်းလွဲပိုင်းကလည်း Army Pavilion, Tundikh ရှိ Bir Smarak သူရဲကောင်းစစ်သည်များ၏အထိမ်းအမှတ်နေရာသို့ သွားရောက်ပြီး ပန်းခွေချအလေးပြုခဲ့သည်။ ပန်းခွေချအလေးပြုပြီးချိန်တွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူအမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျအားနီပေါ တပျမတျောကွညျးတပျဦးစီးခြုပျ Gen. Ranjendra Chhetri က ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့ဖွငျ့ ကွိုဆို၊ တှဆေုံ့ဆှေးနှေး
နီပေါဖကျဒရေးရှငျးသမ်မတနိုငျငံသို့ ခဈြကွညျရေးခရီးရောကျရှိနသေညျ့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျအား နီပေါတပျမတျောကွညျးတပျဦးစီးခြုပျ Gen. Ranjendra Chhetri က ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ ခတ်တမန်ဒူမွို့ရှိ၊ နီပေါတပျမတျောကွညျးတပျဦးစီးခြုပျရုံးရှေ့ မွကျခငျးပွငျ၌ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့ဖွငျ့ကွိုဆိုသညျ။
အဆိုပါဂုဏျပွုကွိဆိုပှဲအခမျးအနားသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှတပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ နီပေါဖကျဒရေးရှငျးသမ်မတနိုငျငံ ဆိုငျရာ မွနျမာနိုငျငံသံအမတျကွီး ဦးထှနျးနလေငျး၊ အိန်ဒိယနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာစဈသံ (ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျမှူးခြုပျ သိနျးဇျောတို့တကျရောကျကွပွီး နီပေါတပျမတျောကွညျးတပျ ဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ နီပေါတပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွသညျ။
ဦးစှာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျသညျ ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့ဖွငျ့ကွိုဆိုမညျ့ နရောသို့ရောကျရှိရာနီပေါတပျမတျောမှ Chief of General Staff ဖွဈသူ Lt. Gen. Purna C Thapa က ကွိုဆိုနှုတျဆကျသညျ။ယငျးနောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့၏ အလေးပွုခွငျးကိုခံယူပွီး ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့အားစဈဆေးသညျ။
၎င်းငျးနောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ နီပေါတပျမတျောကွညျးတပျဦးစီးခြုပျတို့သညျ အစညျးအဝေးခနျးမတှငျ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးကွသညျ။ ထိုသို့တှဆေုံ့ဆှေးနှေးရာတှငျ နီပေါတပျမတျောကွညျးတပျဦးစီးခြုပျက ယခုကဲ့သို့တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ၏ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျသညျ မွနျမာနိုငျငံမှနီပေါနိုငျငံသို့ ပထဦးဆုံးလာရောကျသညျ့မွနျမာ့တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျတဈဦးအနဖွေငျ့ သမိုငျးဝငျခရီးစဉျ ဖွဈကွောငျးပွောကွားပွီး၊ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျကွား ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြား အပွနျအလှနျလညျပတျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား၊ သငျတနျးသားမြားအပွနျအလှနျ စလှေတျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား၊ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှု တိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံတှငျ လှတျလပျရေးကွိုးပမျးမှုကာလမှစ၍ ယခုအခြိနျအထိ နီပေါလူမြိုး ဂျေါရခါးအရာရှိ၊ စဈသညျမြား တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့မှုနှငျ့ စှမျးရညျသတ်တိ၊ ဘှဲ့ထူးဂုဏျထူမြားရရှိခဲ့သညျ့အခွအေနအေား အပွနျအလှနျရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ နီပေါတပျမတျောကွညျးတပျဦးစီးခြုပျတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျပေးအပျကွသညျ။
ထို့နောကျ အစညျးအဝေးခနျးမတှငျ နီပေါတပျမတျောစဈဆငျရေးညှနျကွားရေးမှူး Bri. Gen. Kaji Bahadur Khatri က နီပေါတပျမတျောပျေါပေါကျလာမှုသမိုငျးကွောငျး၊ နီပေါတပျမတျောမှနိုငျငံတကာငွိမျးခမျြးရေးတပျဖှဲ့မြားတှငျ တာဝနျထမျးဆောငျနမှေု အခွအေနမြေား၊ သဘာဝဘေးအန်တရာယျကယျဆယျရေးလုပျငနျးမြားဆောငျရှကျခဲ့မှု အခွအေနမြေားနှငျ့ နီပေါနိုငျငံ၏ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးမြားဆောငျရှကျခဲ့မှု အခွအေနမြေားအား Power Point ဖွငျ့ ရှငျးလငျးတငျပွရာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက သိရှိလိုသညျမြားအား မေးမွနျးဆှေးနှေးသညျ။
ယငျးနောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက နီပေါတပျမတျောကွညျးတပျဦးစီးခြုပျရုံးရှိဧညျ့သညျတျောမှတျတမျးတှငျလကျမှတျရေးထိုးသညျ။ ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့နီပေါတပျမတျောကွညျးတပျဦးစီးခြုပျတို့သညျ တကျရောကျလာကွသညျ့နှဈနိုငျငံ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားနှငျအတူ အမှတျတရ စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျကွသညျ။
ထို့အတူတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ မှနျးလှဲပိုငျးကလညျး Army Pavilion, Tundikh ရှိ Bir Smarak သူရဲကောငျးစဈသညျမြား၏အထိမျးအမှတျ နရောသို့သှားရောကျပွီး ပနျးခှခေအြလေးပွုခဲ့သညျ။ ပနျးခှခေအြလေးပွုပွီးခြိနျတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျသညျ ဧညျ့သညျတျောမှတျတမျးစာအုပျတှငျ လကျမှတျ ရေးထိုးပွီး အဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့အတူအမှတျတရ စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နီပေါဖက်ဒရေးရှင်းသမ္မတနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးထွက်ခွာ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အား နိုင်ငံရေးပါတီ ၃၂ ပါတီမှ ပါတီဥက္ကဋ္ဌများ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများလာရောက်မိတ်ဆက်တွေ့ဆုံ(ရုပ်သံသတင်း)
မတ် ၂၂၊ ၂၀၁၉ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် Shinzo ABE ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Toshimitsu MOTEGI တို့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အား ဂျပန်ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်က ဂုဏ်ပြုကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး(ရုပ်သံသတင်း)
အောက်တိုဘာ ၉၊ ၂၀၁၉ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မဟာသရေစည်သူ မင်းအောင်လှိုင်သည် စစ်ရေးပြအခမ်းအနားအပြီးတွင် ထူးချွန်ဆုရရှိကြသည့် ဗိုလ်လောင်း ၃ ဦးနှင့် ၎င်းတို့၏ မိဘများအားတွေ့ဆုံ၍ ဂုဏ်ပြုအမှာစကားပြောကြား
ဒီဇင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၇ Admin 0